एकीकृत समाजवादीको महासचिव को बन्ला ? यस्तो छ सम्भावना
काठमाडौं । माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको महासचिवमा घनश्याम भुसालको नाम निकै चर्चामा थियो । २ भदौमा नेपाल पक्षका नेताहरूको नाटकीय परिवर्तनले भुसाललाई कोटेश्वरबाट बालकोटनिकट पुर्‍याएपछि नेपाल नेतृत्वको पार्टीको महासचिव को होला ? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
हुनलाई साउन अन्तिम सातातिर एमालेनिकट केही व्यक्तिले माधव नेपाल अध्यक्ष र महासचिवमा विजय पौडेल हुने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको हल्ला चलाएका थिए । केहीले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल र पौडेलको पार्टी के हुँदै छ ? भनेर टिप्पणी पनि गरेका थिए ।
त्यसको संकेत चाहिँ नेपालनिकट भनिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू नयाँ पार्टी गठन गर्दा नेपालसँग हुँदैनन् भन्ने आशय थियो । त्यसबीचमा पौडेललाई नेता नेपालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बैठकमा प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने गरेका थिए । त्यसले पनि पौडेलको चर्चा बढाएको थियो ।
तर, निरन्तर भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक धारणासँग सहमत हुन नसकिने र ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने मत राखिरहेका थिए । ओलीसँग उनीहरूको १०बुँदे सहमति हुनुअघिल्लो दिनमात्रै पनि भुसालको त्यही तर्क थियो । त्यसैले पनि कतै भुसाल नै महासचिव हुने गरी नेपाल नेतृत्वको पार्टी बन्ने त होइन ? भन्ने संशय थियो ।
जब ७ भदौ बिहानै भुसालसहितका ९ जनाको टोलीले बालकोट पुगेर ओलीसँग वार्ता गर्‍यो । त्यसपछि भुसाल महासचिव हुन सक्ने चर्चाको च्याप्टर क्लोज भयो । अब माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको महासचिव को हुनसक्छ ? चन्द्रागिरि रिसोर्टको बैठकमा पनि चर्चा सुरु भइसकेको छ । नेपाल सम्बन्ध पार्टीका नेताहरूसँग संवादमा मूलतः चार जना नेताको नाम आउने गरेको छ ।
केहीले एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका बेदुराम भुसालको नाम चर्चा गरेका छन् । अहिले स्थायी कमिटी सदस्य पनि भएका कारण भुसालको नाम आएको हो । कतिपयले भुसाललाई उपाध्यक्ष बनाएर स्कुल विभागको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने पनि बताउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अर्को नाम भने राजेन्द्र पाण्डेको छ । नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल प्यानलबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार थिए । उपाध्यक्षमा पराजित भएका पाण्डे एमालेको केन्द्रीय सदस्य भने हुन् । त्यसैले उनी महासचिवको दाबेदारका हुन् ।
त्यसबाहेकको नाम भने डा. विजय पौडेलकै हो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईको टिमकै पौडेल पछिल्ला दिनमा ओलीसँग मिल्नै नसकिने र नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । चैत ०७७ मै पौडेलले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने भन्दै माधव नेपालनिकटको केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राखेका थिए ।
एमालेभित्र मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिएका पौडेल पछिल्ला दिनमा नेपालको विश्वासपात्रका रूपमा पनि देखिएका छन् । गठबन्धनको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने गरेकाले पनि उनलाई महासचिवको दाबेदार मानिएको छ ।
त्यसैगरी, केहीले गंगालाल तुलाधरको नाम पनि चर्चामा ल्याएका छन् । मन्त्री पनि भइसकेका तुलाधारको छवि शालीन छ । विपद् व्यवस्थापनमा जापानबाट विद्यावारिधी गरेका तुलाधार पार्टी कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
त्यसकारण पनि कतिले उनको नाम महासचिवमा चर्चामा ल्याइरहेका छन् । तर, यीमध्ये जो आए पनि नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा महासचिवमा भने नयाँ अनुहार आउने निश्चित देखिएको छ ।